Resolution for democracy and decent work in Myanmar [Burmese] - PSI - The global union federation of workers in public services
Resolution for democracy and decent work in Myanmar [Burmese]
အာဆီယံ (အပေါင်း) ဒေသဆိုင်ရာ
၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်
၂၀၂၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အကြား အာဆီယံ (အပေါင်း) ဒေသဆိုင်ရာလူမှု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ လူမှုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် အာဆီယံ၏အဓိက စီးပွားရေးမိတ်ဖက် (၅) နိုင်ငံဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တို့ပါဝင်သည်။ ဤလူမှုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အာဆီယံဝန်ထမ်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ASETUC) သည်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ)(ITUC-AP)၊ အာဆီယံအလုပ်သမားမသဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ATUC)၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်များ - အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသ (GUFs – AP)၊အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ (APHR)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG) တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံများပါဝင်သည့် ဤလူမှုတွေဆုံမှုညီလာခံသည် -
၁၀၉ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာညီလာခံ (ILC) မှ ILO ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) အရ “မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးနှင့်အခြေခံအခွင့်အရေးများအားလေးစားလိုက်နာရန် ဆုံးဖြတ်ချက်" အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်ကိုထပ်မံ အတည်ပြုသည်။
နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၊ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် များ၊ ILO ၏ အခြေခံသဘောတူညီချက်များနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၄)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအပါအ၀င်၊မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလေးစားလိုက်နာပါသည်။ (A/75/L.85/Rev.1)
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းမှု၊ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားညီလာခံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ တောင်းဆိုချက်များအား ဆန့်ကျင်သည့် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စု၏ တရားမဝင်လုပ်ရပ်များအားလုံးကို ပြတ်ပြတ် သားသားရှုတ်ချသည်။
ILC ဆုံးဖြတ်ချက်၌ ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများသည် ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင်သည် လူပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်အား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူ (၇၀၀၀) ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အနည်းဆုံး (၅၈၀၀)ကို မတရားထောင်ချခြင်းကို လည်းကောင်း၊ နောက်ထပ် ဖမ်းဝရမ်းတွေအများကြီးထုတ်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်သူ (၂၆)ယောက်ကို သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းများ အားလုံးကို၊ သတိမှတ်ချက်ပြုသည်။
မကြာသေးမီလများအတွင်း၊ Covid-19 ကပ်ရောဂါသည်၊ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကူးစက်မှု လျှင်မြန်စွာ ပြန့်နှံ့လာပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်ရာမှာတွင် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများကို အပြစ်ပေးရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ်များကို အနည်းဆုံး (၂၆၀) ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည်၊ Covid-19 ကပ်ရောဂါပိုမိုဆိုးရွား လာအောင်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။
စစ်တပ်နှင့် အာဏာသိမ်းမှုကို ထောက်ခံခြင်းမရှိစေရန်၊ စစ်တပ်နှင့်မပူးပေါင်းပဲ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများစွာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းများစွာသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များအား လျစ်လျူရှုလျှက် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကို ဆက်လက်ထောက်ခံနေသည်မှ‌ေ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုသည် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ မတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ်များကို စစ်အင်အားဖြင့် ကျူးကျော်တပ်ချနေခြင်းကို အလွန်အမင်းစိုးရိမ်လျှက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင် လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းများအား ဆက်လက်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့် မတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေခြင်းများကို အထူးစိုးရိမ်လျှက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် သပိတ်မှောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရဲရဲရင့်ရင့်လုပ်ဆောင်နေကြသည့် အလုပ်သမားများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်။
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲစည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) သည် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG)ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိလွှတ်တော်များ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များ ဒီမိုကရေစီလုပ်ရပ်များကို အသိအမှတ်ပြုသည်။
ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းကို ထောက်ခံရန်လိုအပ်ကြောင်း နှင့် "တစ်ခုထက်ပိုသောအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်၊ နိုင်ငံတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရှိသောအစိုးရဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည့်အခါတိုင်း" ထိုလျှောက်လွှာများကို "ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံမူများအရ" ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ (A/RES/396(V)). ဤရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အခြေခံမူများတွင်၊ "ကျူး​ကျော်လုပ်ရပ်များကိုနှိမ်နင်းခြင်း"၊ "တရားမျှတမှုနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေ မူများညီညွတ်ခြင်း"၊ "တန်းတူအခွင့်အရေးများနှင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်/ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်များကို လေးစားလိုက်နာခြင်း"၊ နှင့် "လူမျိုး၊ လိင်၊ ဘာသာစကား (သို့) ဘာသာတရား မခွဲခြားဘဲအားလုံး၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို" လေးစားမူတိုးတက်ဖြစ်ထွန်း စေခြင်း နှင့် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းများပါဝင်သည်ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အား မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၊ အစိုးရများကိုတောင်းဆိုသည်မှာ -
A. UNGA ၏ အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီနှင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသည် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အား မြန်မာနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုသော တရားဝင် အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအား ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုရန်
B. ကုလသမဂ္ဂ၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်မဆို၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုရန် စစ်အစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချရန်
C. NUG ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူတို့၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရန်
D. စစ်တပ်နှင့် သံတမန်ရေး စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကို ဖြတ်တောက်ရန်နှင့်၊ စစ်တပ်နှင့်၎င်းတို့ ၏ မိသားစုများနှင့် တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်သော စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုမှန်သမျှကို အဆုံးသတ်ရန်
E. ဤသို့အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းစဉ်တွင်း စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များမှ အလုပ်သမားများနှင့် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်သောရာဇ၀တ်မှုများကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ပြစ်မှု တရားရုံး (ICC) သို့ လွှဲအပ်ပေးပါရန်
F. NUG မှတဆင့် (သို့မဟုတ်) NUG မှထောက်ခံသော အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားများအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ် ရေးအကူအညီများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါရန်နှင့် ငွေကြေးနှင့် ထောက်ပံ့မှုများသည် စစ်တပ် ဆီသို့ဦးတည်မသွားဖို့သေချာစွာလုပ်ဆောင်ရန်
G. နိုင်ငံများသည် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (RCEP) (သို့) မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် အခြားကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုအတည်ပြုခြင်း(သို့မဟုတ်) အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ပြည်သူ့အစိုးရပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အခါ၊ အကျပ်အတည်းမျိုးစုံ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ဖို့၊ သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါရန်
H. အာဆီယံနိုင်ငံများသည်၊ အာဆီယံအထူးပြုကိုယ်စားလှယ်သည် NUG၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံရေး သေချာစွာလုပ်ဆောင်ပါရန်နှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်နှင့် စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်စဲပြီး၊ အရပ်သားအစိုးရအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သေချာစွာလုပ်ဆောင်ပါရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)
မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအခွင့်အရေးများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါရန်
အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများအားလုံးနှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကို လေးစားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ်ဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားပါရန်နှင့်၊ အစိုးရတစ်ရပ်လုံးသည် ပြည်သူလူထူအား အပြည့်အဝ ကိုယ်စားပြုသော၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ရန် သေချာစွာလုပ်ဆောင်ရန်
ဒီမိုကရေစီကာကွယ်ရေးအတွက် အလုပ်သမားများနှင့် သူတို့ရဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါရန်နှင့်၊ သမဂ္ဂများအဟန့်အတားမရှိပဲ တိုးတက်အဆင် ပြေအောင် မြင်နိုင်စေမည့်ဥပဒေပြုရေးနှင့်မူဝါဒမူဘောင်သစ်ပြုရေးနှင့်၊ အလုပ်သမားအားလုံး ကောင်းမွန်သောအလုပ်နှင့်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကိုရရှိခံစားနိုင်ရေးလုပ်ဆောင်ရန်ကတိသစ္စာပြုပါရန်
အခွန်များထုတ်ယူခြင်း (သို့) ပစ္စည်းအထောက်အပံ့များကို စစ်တပ်သို့ပေးခြင်းအပါအ၀င် စစ်တပ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်စေမည့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်သောမည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမဆို ရပ်ဆိုင်း ပါရန်
မြန်မာပြည်ရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခနှင့် အသက်မွေး၀မ်းကြောင်းများကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းပါရန်
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ (သို့မဟုတ်) ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများသို့ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန် (သို့မဟုတ်) ငွေပေးချေမှုမှန်သမျှကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာကိုင်ထားပြီး၊ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ရရှိ သောအခါပေးအပ်ရန်၊
ILO ပြဌာန်းချက်အမှတ် (၈၇)နှင့် (၉၈) ကို အလေးထားရန်နှင့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များသည် အကြမ်းဖက်မှု မတရားဖမ်း ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်သော လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေတွင် ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခွင့် အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်
NUGမှတဆင့် (သို့မဟုတ်) NUGမှထောက်ခံသော အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားများအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများကို ထောက်ပံ့ပေးပါရန်နှင့်၊ ငွေကြေးနှင့် ထောက်ပံ့မှုများသည် စစ်တပ်ဆီသို့ ဦးတည် မသွားရန် သေချာစွာလုပ်ဆောင်ပေးပါရန်
သမဂ္ဂများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို ထောက်ခံသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနေ့ကို ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပါရန်နှင့်၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အပြည့်အဝ စီမံအုပ်ချုပ်လာနိုင်သည့်အချိန်ထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော စည်းရုံးရေး တိုက်ပွဲစဉ်များကို ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပါရန်ပံ့ပိုးပါရန်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သမဂ္ဂများနှင့် အလုပ်သမားများအား ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း ၎င်းတို့၏ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးပြုခြင်းနှင့် အခြားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြသည့်လုပ်ဆောင် မှုများပြုခြင်းတို့ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုပေးပါရန်
ပြည်သူ့အစိုးရအပြည့်အ၀ ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးသည့်နောက် ဒီမိုကရေစီသစ်နှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံကို ပုံဖော်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများကို ပံ့ပိုးဖို့အသင့်ရှိပါ။